Iindaba - Izizathu zokuthandwa kweebhotile zeglasi yekalika yesoda
Izizathu zokuthandwa kweebhotile zeglasi yekalika yesoda
Iibhotile zeglasi zizikhongozeli zamayeza, ukutya, kunye neemveliso zokhathalelo lwempilo. Phakathi kwazo, ibhotile yeglasi yesoda yenziwe ngezinto ezingafunekiyo kwaye zicocekile kwindawo yokusebenzela yokucoca i-100,000. Iibhotile zeglasi yesoda kulula ukuzenza, kunye neemilo zasimahla nezitshintshayo, kunye neendidi zeebhotile. Kutheni iibhotile zeglasi yesoda zithandwa kangaka? Ibhotile yeglasi yesoda-lime yenziwe ngeglasi yesoda-lime njengelitye ekrwada, enokuzinza kweekhemikhali, ukumelana neasidi, ukunganyangeki kwealkali kunye nokumelana. Ingasetyenziselwa ukupakisha izikhongozeli zamayeza ahlukeneyo. Ibhotile yeglasi yesoda ineepropathi ezizinzileyo zoomatshini. Iyakwazi ukumelana noxinzelelo kwibhotile ngexesha lokuhamba kunye namandla angaphandle ngexesha lothutho lwangaphandle. Yenze inkqubela phambili enkulu ekuchaseni izinto. Ukucaciswa okwahlukileyo kuqulethe amandla ahlukeneyo, anokuhlangabezana neemfuno zabathengi kwizakhono ezahlukeneyo zeemveliso. Amandla ezahlukeneyo zixhotyiswe iintlobo ezahlukeneyo ezineziciko, kunye nokuhlelwa ezineziciko nazo ezahlukeneyo. Inokuxhotyiswa ngesiciko sealuminium, isiciko sealuminiyam, intsimbi yeplastiki enemibala eyahlukeneyo, iglasi yebutyl, igasket yesilic, igasket yepe, njl. Ibhotile yeglasi yesoda inegunya elipheleleyo. Abathengi banokukhetha ngokomthamo weemveliso abazifunayo, kwaye banokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi. Umgangatho ungqongqo ngokungqinelana neemfuno zabathengi, kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.
Ibhotile yeglasi yeCoca-Cola isetyenziswe ngaphezulu kweminyaka eli-100. AyisiyiCoca-Cola kuphela, ikwangumzuzu ofanelekileyo ukuba uwukhumbule kwishishini lokupakisha. Ngophuhliso olukhawulezileyo lweshishini namhlanje, iimveliso zaziswa ngesantya esikhawulezayo. Ezinye iipakeji ezintsha zithathelwe indawo zezinye iipakeji ngaphambi kokuba ziqhelane namehlo abantu. Iphakheji yebhotile yeglasi isetyenzisiwe ixesha elide. Ngaphezulu kweminyaka eli-100, oku kunentsingiselo. Ngapha koko, kuhlalutyo lwedatha yethu eyahlukeneyo, isantya sokuhlaziywa kokupakishwa kwebhotile yeglasi emva kokusetyenziswa kuyacotha kakhulu kunenye into yokupakisha efana neplastiki kunye nebhokisi. Oku ikakhulu kungenxa yokuba iindleko zemveliso yokupakishwa kwebhotile yeglasi iphezulu kakhulu, kwaye ukubuyiselwa kwezixhobo zemveliso kuya kuba phezulu kuzo zonke iinkalo. Enye into kukuba iimveliso zokupakisha zeebhotile zeglasi zihlala zisetyenziswa kwiimveliso ezinesiphelo esiphakamileyo, kwaye abavelisi beebhotile zeglasi baneemfuno eziqinileyo zokuzinza kokupakishwa kwemveliso. Kodwa ukufezekisa ukupakishwa okudala njengeebhotile zeglasi zeCoca-Cola, kuninzi ekufuneka kwenziwe. Ngokukodwa kwinqanaba lokuqala loyilo lokupakishwa kweebhotile zeglasi, kufuneka wenziwe umsebenzi ongaphezulu, kwaye kufuneka uphando ngakumbi lwentengiso.Ukuba umenzi, ukuba ukupakishwa kwebhotile yeglasi kunokwenziwa kube yinto yakudala, ayizukunceda kuphela ukumisa uphawu , kodwa kumgca wemveliso, iya kushenxisa iindleko zokutshintsha, kwaye inciphise nenkcitho kwimiba eyahlukeneyo yoqeqesho lomsebenzi wabasebenzi. . Ke ngoko, ukubumba ukufakwa kwebhotile yeglasi ngempumelelo kunokuthiwa kunenzuzo kwaye akunabungozi kubavelisi.
Ixesha Post: Oct-09-2020
Iibhotile zeglasi zeempompo zeeoyile ezifanelekileyo, Iglasi Ibhotile yokuthambisa ngePomp, Iglasi Bottle Nge Spray Pump, Sula iibhotile Pump Pump, Iibhotile zePompo yeGlasi yeShampoo, Iglasi Bottle Nge Pump wekhadi,